Mashandisiro ekushandisa akawanda WhatsApp maakaundi pane iOS pasina Jailbreak | IPhone nhau
Wakafunga kangani pamusoro pekuti zvingave zvinonakidza sei kuve neakawandisa WhatsApp maakaundi pane imwechete iPhone? Vazhinji, isu tinoziva. Nekudaro, iyo nguva yasvika, neichi chidiki chidzidzo isu tichakudzidzisa mashandisiro ekushandisa akati wandei WhatsApp maakaundi (ese ari maviri ane nhamba dzakasiyana) pane imwecheteyo iOS chishandiso. Iwe uchatitaurira kuti hapana chinhu chitsva, nekuti izvi zvaigara zvichikwanisika naJailbreak, asi chaizvo ichocho chiri chitsva, kuti haudi Jailbreak kana iwe ukashandisa nzira iyi yekuda kuziva. Unogona kuzviita nekukurumidza uye nyore nzira, inowanikwa kubva kuIOS 9.0 kuenda kuIOS 9.2 kuitira kuti munhu wese atore mukana iwoyo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti kune izvi isu tinoshandisa nyowani yechitatu-bato nhoroondo yatinofanirwa kuisa pane iyo iPhone, zvinoreva kuti zvinogona kuitika chengetedzo njodzi iwe unofanirwa kuve nechokwadi kuti unoda kumhanya usati watanga maitiro, saka unofanirwa kuziva Iwe unoshandisa nzira iyi panjodzi yako wega. Nekudaro, kusvika parizvino kwete hapana chinoratidza kuti chimiro chinokanganisa kuchengetedzeka yemudziyo wedu munzvimbo ipi neipi.
Dhawunirodha uye gadza inozove yako yakajairwa WhatsApp account, yakabatana nenhamba yako yakajairwa.
Pane imwe yaiswa, vhura Safari pane yako kifaa
Enda ku "ios.othman.tv"
Sarudza "WhatsApp 2«
Kana iwe watevera nhanho mumufananidzo iwe uchaona kuti yeorenji WhatsApp inotanga kurodha pane yako SpringBoard.
Zvichatikumbira kuti tiise chitupa nemavara echiArabic, isu tinopa «install".
Kana tangoisa tinofanirwa kuenda ku «Zvirongwa> Zvakajairika> Maprofiles»Kuongorora iyo nyowani nyowani yaunoda kuisa, kuti ugone kupa zvakakwana kuchengetedzeka mvumo kune iyi nyowani WhatsApp.
Dzvanya pa «Vimba«
Isu tatova neApple yakamisikidzwa WhatsApp inowanika neimwe nhambandiko kuti, isu tine maviri maApplication eAppApp anowanikwa pane imwecheteyo kifaa. Kunyangwe, chiri chokwadi kuti kurodha kweyechipiri WhatsApp mutengi (iyo ine icon yeorenji) ichave inononoka, saka gadzirira kutsungirira. Nekudaro, maitiro acho ari nyore kwazvo.
Mukuwedzera kune WhatsApp, inotipa mukana wekuisa zvakare yechipiri account yezvishandiso senge Facebook, Vine uye Instagram. Saka kubatsira kweiyi nzira kwakanyanya kwazvo. Ramba uchifunga kuti isu hatizive kuti zvinotora nguva yakareba sei Apple kurwisa iyi nzira yekusavimbika kwetsika kuisa maakaunzi akati wandei, saka kana uinazvo mupfungwa, usazeze uye enda kumberi. Inzwa wakasununguka kutitaurira mune zvakataurwa kuti iyi imwe nzira nyowani inoshanda sei kwauri. Ini ndatoishandisa pa Instagram uye inoenda yakakwana!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro ekushandisa akawanda WhatsApp maakaundi pane iOS pasina Jailbreak
Nyaya iyi inoita senge inoda kuziva kwandiri, uye kune vanhu vanoda kuve neinoshanda WhatsApp nevamwe vashandi ndinoiwana «inonakidza, asi pekutanga, nei ndichida 2 WhatsApp maakaundi? Ndine yangu yekushandisa pachangu uye yebasa handisi kuzoshandisa whatsapp….
Zvakanakisa, kubasa kwangu vanondipa isina-smart foni yemakambani saka ichave iri yakanakisa sarudzo yandinofanira kubata WhatsApp pane yangu nharembozha ndisina kupa yakavanzika nhamba yevashandi vekubasa !!
Iyi nzira yakavimbika zvakadii ???? Ini handisi panjodzi aq rakabiwa ruzivo kana zvinhu zvakadaro zvechimiro.
dhawunorodha whats app uye yakakwana ... Ini ndinochengeta iyo whats app kubva kunyika mbiri dzakasiyana ... ikozvino iyo instagram ini handina kukwanisa kuvhura, pandinoisa password inovhara
Pindura kune aiacobellis
Mhoroi, ndakaitora pasina matambudziko asi pandakavhura ndinowana chikwangwani chekuti Apple haibvumidze uye hapana chimwe chandinogona kuita. Iphone 6 IOS9.2
Danieri unofanirwa kuisa marongero / general / manejimendi manejimendi ... uye bvumidza VNE Software uye Technology
Kugadziriswa. Inoshanda zvakakwana. Ndatenda.
LEONEL DIAZ akadaro
Sezvo ini ndichiimisikidza, ndinofanira kupa iyo yakafanana nhamba yesero rangu kana inofanirwa kunge iri imwe ???
Pindura kuna LEONEL DIAZ
Zvinondiudza nguva dzese kuti hazvigoneke kuisa chishandiso panguva iyoyo ... Chii chandinoita? Ini ndatodzoreredza iyo iPhone uye haimire.
Rine dambudziko rezviziviso risingasvike kana iyo app yanga isina kuvhurwa yakagadziriswa?
Izvo hazvishande kwandiri, pese pandinoedza ndinowana mhosho, "Hazviite kudhawunirodha App iyi." Pane chero munhu atoita rombo rakanaka?
Iniwo ndinowana hazviite kurodha pasi iyi app
Zvinonakidza ... Asi neiyo WhatsApp account ini ndafuridzirwa ... regai titaure nemaviri ... kunenge kuri kuzviuraya .. hahaha
asi, zvisinei hazvo ini zvandinoda, ndinofanira kunge ndine imwe nhamba padhuze kuti ndive nayo muchigadzirwa chimwe chete; sezvo whatsapp inokumbira kukutumira kodhi yekusimbisa ... kana kwete?
Cesar Blancarte akadaro
"Profiles" Ini handisi kuzviona chero kupi?
Pindura kuna Cesar Blancarte
Ini handitore iyo "profiles" chinhu futi.
marongero / general / manejimendi manejimendi… uye bvumidza VNE Software neTekinoroji
Manejimendi manejimendi ??? .. Izvo hazviite ini
zvinoratidzika kwandiri pasi peVPN
Sai maldonado akadaro
Ini handikwanise kuiisa, ndinowana "zvisingaite kurodha pasi app" ... Panguva ino, "whatsapp 2" haigone kuiswa. Ndinozvigadzirisa sei? Iyo inotorwa pasi, asi haina kuiswa. Ndatenda.
Pindura Sai Maldonado
Kana ndichiiisa ini ndinowana kukanganisa, chero mhinduro? Ndatenda
Iyo inopa kukanganisa uye haitenderi kurodha pasi, kana neniwo
Mashoko acho anobuda
Zvinoita sekunge apuro yatogadzirisa, nekuti haindibvumidze kuti ndiiise kana, meseji "isingakwanise kurodha pasi" "ok" kana "kuyedzazve" zvichingodaro.
Chuck Norris akadaro
Ini ndinoona zvese izvi zvekumisikidza zvichinyumwira, ndinovimba kuti kuchengetedzeka kwephone hakuna kukanganiswa asi tichazoona kana nguva yapera
Pindura Chuck Norris
Ndinogona here kushandisa chishandiso chakafanana pazvidimbu zviviri zvakasiyana ????
Pindura kuna Nel
Kudzivirirwa kwakandikukura ...
Haikwanise kuiswa…. Unoziva here kuti nei ??? Zvinondiita kuti ndiedze zvekare ...
Zvakanaka, ini handiwani ma profiles kana manejimendi manejimendi.
Icho chokwadi ndechekuti ini ndinotaipa mukutsvaga pamusoro pamusoro pezvirongwa uye zvinobuda
Asi ini ndinodzvanya pazviri uye zvinonditumira kune zvakajairika uye ipapo ini handione chero chinhu nezve manejimendi manejimendi
Ini ndaive nedambudziko rakafanana ... Unogona kuzvigadzirisa?
Ndakaitora pasi nezuro uye ndakakwana. Nhasi uno whatsapp yanga isingashande saka ndazama kuidzora zvekare asi inogara ichikanganisa. izvi zvinonhuwirira zvakaipa….
Yakavharwa ... kukanganisa kunosvetuka kana uchiisa uye chitupa hachina kutorwa mumafaira epa iPhone
Izvo hazvishande, kubva nezuro masikati haina kurodha pasi.
Iyo whats app iri kundishandira pasina matambudziko .. iyo instagram ndinodzika asi inondipa kukanganisa ..
Francisco Javier Ariza Molina akadaro
Ndine iphone 6s pamwe ios 9.2 uye inoita kuti ndiitore asi panguva yekuiisa inondiudza kuti haigone kuyedzwazve ndanga ndichitsvaga mune mamwe maforamu uye vamwe vanoti inoshanda muiyo ios 9.2 uye nevamwe kuti ndizvo chete zve7 ne8 hazvizive maitirwo azvo, hapana maprofiles anoonekwa kana chero zvakadaro
Pindura kuna Francisco Javier Ariza Molina
Ini ndinowana kurodha kumwe chete asi kana yapedza kuiisa iyo inondipa kukanganisa, hazvigoneke kurodha pasi iyi app panguva ino. ndibatsire..
Kusvikira nezuro iko kunyorera kwakashanda nemazvo, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri uye handikwanise kuchidzorera. Ini ndinowana kukanganisa.
Alberto Iacobellis akadaro
Pindura kuna Alberto Iacobellis
chero munhu anoziva nezveimwe nzira?
Ndakaiyedza pane IOS 8.4 uye imwe 9.1 uye yakashanda pasina matambudziko, ini ndaisatombo fanirwa kuita mvumo mbiri nekuti haina kubvira yaonekwa, kukwazisa nekutenda neruzivo, ini ndanga ndave kuneta nekutsvaga sarudzo kune iyo duplicator yemagariro.
Donell Mendez akadaro
Usaimise, iyo pod yakandikonzera kurasikirwa nemazana mashanu emifananidzo kubva kune yechinyakare app Mapikicha kubva kune yangu iphone 500. Iyo haindibvumidze kuti ndipinde iwo mapikicha app uye handigone kuchinja yangu yemapikicha pikicha kubva kuWhatsApp. ikozvino ndinofanira kudzorera uye kukopa iCloud negadziriro yeparutivi pamusoro mudziyo wangu. USASIMBISA I ndinokuudza uine base.
Pindura Donell Méndez
Dhawunorodha kukanganisa, chimwe chinhu chinogona kuitwa
Inondipa kukanganisa uye ini handikwanise kuiisa. Ndine iphone 6 ine ios 9.2. Iniwo handizive maitiro ekuwana ma profiles mune Zvirongwa - zvakajairika- ma profiles, ini handina ma profiles, zvirinani kutevera iyi nzira.
Ini ndakakwanisa kuiisa, mushure mekurodhaunira ndakabvumidza iyo mbiri mune zvigadziriso uye ipapo ini ndakagadzirisa zvakajairika! Ndakaedza mameseji kubva kufoni yangu pamaakaundi ese uye anoshanda, asi seshamwari paforamu inoti, kana ukaneta neakaundi imwe, fungidzira uine 2. Ndakasarudza kuidzima uye kuisa Teregiramu yekutumira mafaera anosvika 2 g uye g. Inonyanya kubatsira
Sandra Tobon akadaro
Mhoro Alfredo, mushure menguva yakareba sei yekuyedza iwe unogona kuiisa? Chero mhinduro dzekuisa? inoshanda kune iphone 9.2?. Ndatenda nerubatsiro rwenyu
Pindura Sandra Tobon
Iyo inogara ichigadzira kukanganisa kuti haigone kutorwa pasi, ini ndinoshandisa iOS 9.2 isina jailbreak uye haishande. Ndanga ndichiedza kuiisa kwemaawa matatu
Yangu iPhone 6S haioneke »profiles» pane chero munhu anoziva kana iri imwe nzira kana chimwe chinhu chinofanirwa kuitwa kuti chionekwe? Kana ini ndikasapa mvumo kunyorera haigone kuiswa. Ndatenda.
Mumwe munhu atowana mhinduro, zvakatora mazuva maviri kuti uedze zvakare asi zvakakanganisa pakutora, senge vazhinji vavo, kwaziso ...
Ini handikwanise kuisa, ini ndatova nechikumbiro, ndinopinda Safari uye handisi kuwana "ios.othman.tv, unogona kundibatsira?
Pindura kuna Diegollll
Ini handikwanise kuiisa. iyo icon inoonekwa pane desktop asi inonyangarika yega uye hapana chakaiswa
Miguel Angel Arredondo Salvatierra akadaro
zvinosuwisa zviri pachena kuti hazvishande, zvaitaridzika kunge zvinonakidza
Pindura Miguel Angel Arredondo Salvatierra
Iyo Pg "ios.othman.tv" haina kukodzera neniwo, inosvetukira ku "vips.othman.tv" uye iyo icon haina kuoneka.
isina kuiswa, chero mhinduro?
Iyo peji uko iyo whatsapp inotorwa haina kundipa iyo sarudzo. Pane chero munhu anoziva nezvazvo? Ini handikwanise kudzvanya whatsapp 2.